ပြောင်းလည်းလာနေသော Cryptocurrency အပိုင်း - ၅ ( Henry Aung ) - PALnet
ပြောင်းလည်းလာနေသော Cryptocurrency အပိုင်း - ၅ ( Henry Aung )
မင်္ဂလာပါ။ ယနေ့တော့ ကျွန်တော်တို့ ၏ မပြီးပြတ်သေးသော Cryptocurrency အဆက်ဖြတ်ကြပါစို့။ ယခင် ဆောင်းပါတွင် De-Fi အကြောင်းအား ဖေါ်ပြပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည့် အတိုင်း Cryptocurrency ကိုင်ထားကြသူ အများက Cryptocurrency မှ ငွေစက္ကူထုတ်ယူရခြင်းထက် မိမိတို့ Cryptocurrency ပိုမို ပွားများလာစေရန် De-Fi တို့တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလာကြပါသည်။
De-Fi တို့ မည်မျှ အောင်မြင်လာသနည်း ဆိုလျင် 2020-2021 တွင် BTC 3000$ မှ 50000 $ ကျော် အထိ တက်သွားခြင်း BNB USD 20$ ကျော်ခန့် မှာ USD 600$ အထိ ဈေးတက်သွားခြင်း Ethereum အနေဖြင့် သူ၏ ထုတ်လုပ်ပြီး Coin - ETH ၉၅ % ကျော် ခန့် Stack လုပ်ပြီးသွားခြင်း နှင့် စုစု ပေါင်း ETH stack လုပ်ထားသော ပမာဏမှာ ဒေါ်လာ ၁၃ ဘီလီယံ အထိ ရှိခဲ့ပါသည်။
ဤ သည်မှာ ETH တခုတည်း အတွက်သာ ဖေါ်ပြပေးရခြင်း ဖြစ်၍ အခြားသော BNB / BTC / EOS စသည်တို့၏ De- Fi များအား ထည့်တွက်ကြည့်လိုက်လျင် လက်ရှိ Cryptocurrency De-Fi ဈေးကွက် မည်မျှ ကြီးမား ကျယ်ပြန့်ကြောင်းကို ခန့် မှန်း နိုင်ကြမည်ဟု ထင်ပါသည်။
KYC အကြောင်း အားဆက်ကြပါအုံးစို့။ Cryptocurrency တွင် KYC ဝင်လာခြင်း မှာ အချို့က ကြိုက်ကြသလို အချို့က မကြိုက်ကြပါ။ KYC ရှိခြင်းကြောင့် Cryptocurrency တွင် Scam နည်းသွားသလို ပြင်ပမှ ငွေမဲ စီးဝင်ခြင်း အား အထိုက်အလျောက် ကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားပါသည်။
ထို့ကြောင့် Cryptocurrency ချစ်သူများက KYC ကြောင့် Cryptocurrency လောက သန့်သွားသည်ကို ကြိုဆိုကြပါသည်။ သို့သော် Cryptocurrency အား သန်းနှင့်ချီ၍ ပိုင်ဆိုင်ထားသူများ ဥပမာ ငွေကြေးခဝါချလိုသူများက KYC ကို မလိုလားကြပါ။
အဘယ့် ကြောင့် ဆိုသော် ယခုနောက်ပိုင်းတွင် တင်းကျပ်သော KYC များကြောင့် မိမိ ဒေါ်လာ ၁ သိန်းခန့်မျှ Cryptocurrency မှ ထုတ်ယူလျင် သေချာပေါက် ဖြေရှင်းချက် ပေးရမည့် သဘောရှိပါသည်။ ဥပမာ မိမိသည် BTC မည်မျှ စုထားသည် ။ မိမိ Trading လုပ်၍ မည်မျှ မြတ်သည် ။ စသည်ဖြင့် မိမိ ထုတ်ယူသော ငွေသည် ငွေဖြူ ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရမည် ဖြစ်ပါသည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် Cryptocurrency မှ ငွေစက္ကူ ထုတ်ယူရန် တနည်းသာ ရှိပါသည်။ မိမိပိုင်ဆိုင်သော ဘဏ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားရုံသာဖြစ်ပါသည်။ Exchange ကလည်း ထို Bank အားလက်ခံသည် မိမိလည်း ထို Bank တွင် အကောင့် ဖွင့်ထားသည်ဆိုလျင် ပြသနာမရှိပါ။
သို့သော် အထက်တွင် ကျွန်တော် ဖေါ်ပြထားသကဲ့သို့ ငွေကြေးများစွာ တပြိုင်တည်း ထုတ်ယူရန် အတွက်တော့ KYC ကြောင့် ဖြေရှင်းရန် လိုပါလိမ့်မည်။
ဤပြသနာ များအတွက် Exchange Site များကလည်း ဟကွက် ပေးထားပါသည်။ မိမိတို့ Exchange Site တွင် KYC ပေးထားသူတို့ အတွက် နေ့စဉ် ငွေကြေးထုတ်ယူခွင့် BTC မည်မျှ ထုတ်နိုင်သည် KYC မဝင် ထားသူတို့ အတွက် BTC မည်မျှ ထုတ်နိုင်သည် ဟူ၍ ကန့်သတ်ထားပါသည်။
ယခင် က Binance တွင် KYC မတင်ထားသူတို့၏ ငွေထုတ်ယူနိုင်သော ပမာဏမှာ2BTC ဖြစ်ပါသည်။2BTC ဟူသည်မှာ အတော်များသော ပမာဏဖြစ်ပါသည်။ အမှန်ဆိုရလျင် ယခုတော့ Non KYC များအတွက် ယခု အတွက်လည်း2BTC ထုတ်ခွင့်ရှိနေသည်သေးလားတော့မသိပါ။
ကျွန်တော် ကဲ့သို့သော သူများ အတွက်တော့ KYC verified ဖြစ်သည် ဖြစ်စေ Non verified ဖြစ်စေ2BTC မထုတ် နိုင်သည်ကတော့သေချာပါသည်။ ဆိုလျင် ကျွန်တော့အတွက်ကတော့ cryptocurrency မှ တရက်လျင် ဒေါ်လာ သိန်းချီ၍ မထုတ်နိုင်သည်မှာ သေချာ သလို ဒေါ်လာ ထာင်ချီ၍လည်း မထုတ်နိုင်ပါ။
ထို့ကြောင့် Exchange site တွင် KYC verified ဖြစ်ထားလည်း မိမိအား မည်သူမျှ စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်နေမည်မဟုတ်သည်ကတော့သေချာပါသည်။
အကယ်၍ မိတ်ဆွေ အနေဖြင့် တရက်လျင် ဒေါ်လာ သိန်းနှင့်ချီ၍ Cryptocurrency မှ ငွေကြေးထုတ်ယူမည်ဆိုလျင်ဖြင့် KYC ကျော်ဖြတ် ရန်အတွက် အကောင်းဆုံး နည်းမှာ တနေ့ သတ်မှတ်ထားသလောက် နည်းနည်း သာ ထုတ်ယူပါရန် အကြံပေးလိုပါသည်။
တလလုံးနေမှ USD ၅၀၀ $ ခန့်ပင် မထုတ်ယူနိုင်သော ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော သူများ အတွက်တော့ KYC Verified ဖြစ်သည် မဖြစ်သည်ကို မည်သူမျှ စိတ်မဝင်စားကြသည်ကို သတိထားစေလိုရင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ကဲ့သို့သော စာရေးရင်း Cryptocurrency စုသူများမှာ ၃ လတကြိမ် Exchange မှ ငွေထုတ်ယူ နိုင်လျင် အတော်ပင် ကံကောင်းနေသော အနေအထား ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့် ကြောင့်ဆိုသော် Hive power စုရ / Leo power စုရ / Hive Engine token များလည်း ဝယ်စုရ။ မိမိရသမျှသော Cryptocurrency များသည် မိမိကြိုက်သော Cryptocurrency များအတွက် သုံးမလောက်အောင်ပင် ဖြစ်နေသည်ကို အားလုံး အသိဖြစ်ပါသည်။
KYC ဖြင့် စိတ်မညစ်စေလိုပါ။ မိမိ ရနိုင်သမျှ စုနိုင်သမျှ သော Cryptocurrency များသာစုရန် အကြံပေးတိုက်တွန်းလိုပါသည်။ မိတ်ဆွေများ Cryptocurrency ဖြင့် အောင်မြင်ကြပါစေ။
28/08/2021 - Saturday - 20;20 Pm
hive-122133 myanmar proofofbrain creativecoin aeneas archon leo palnet neoxian sharing
တနေ့နေ့ပေါ့။ မဝေးတော့ပါဘူး။ !PIZZA
KYC အတွက် ရှင်းပြထားတာလေး သဘောကျပါတယ်။ ဟုတ်ပ Hive နဲ့ Hive engine မှာတင် သံသရာလည်နေရောပါ။ !PIZZA
နှောင်တော့ Hive platform ကနေ လစာထုတ်သလို ထုတ်လို့ရမယ် ထင်ပါတယ်။ !PIZZA
အော် KYC အလှမ်းဝေးတဲ့ ပန်းကလေးပါလေ
ကိုယ်တွေ hive နဲ့ အလုပ်များနေတာပါ။
အလှမ်းမဝေးပါဘူးကွယ်။ လုပ်ချင်ရင် အလွယ်လေးပါ့။ !PIZZA
မိမိမှာ တစ်နေ့ 10$ ပင်မထုတ်နိုင်သော်လဲ နောင်တစ်ချိန် များများထုတ်နိုင်မည်ဟု ရည်မှန်းထားပါသည်
ဟုတ်ပါတယ်။ အစ်ကိုလည်း နှောင်တချိန်အတွက်ပဲရည်ရွယ်ထားပြီး ကြိုးစားနေတာ။ ! PIZZA
ဗဟုသုတ များစွာ ရပါတယ် ခင်ဗျာ။
@sayalu! I sent youaslice of $PIZZA on behalf of @kachinhenry.